फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - लखरठ्याकको लोकतान्त्रिक दशैँ !!
लखरठ्याकको लोकतान्त्रिक दशैँ !! नरनाथ लुइँटेल
लखरठ्याकलाई पनि दशैँ मज्जासँग लागेको छ । किनकिन नेपालीहरूलाई दशैँ आउनुको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ, हुने गरेको छ । उहिले दशैँ ऋण बोकाउन र बसैँ हिँडाउनलाई आउँथ्यो । अहिलेको दशैँ वर्षभरिको खर्च उठाउन र अनधिकृत वजेट जुटाउनलाई आउन थालेको छ । यो त ठूलै परिवर्तनको सङ्केत हैन र ? हैन भन्ने लाग्छ भने दशैँको सेरोफेरोमा यो लखरठ्याकले देखेभोगेका केही दृश्यचित्रहरू हेरौँ त :
लखरठ्याक लाग्यो एयरहरूका काउन्टरतिर– बुद्ध एयर, अग्नि एयर, श्रीएयर.... । यता दगुर्यो छैन, उता दगु¥यो छैन । छैन, छैन, छँदै छैन । हे फसाद ! लामो सुस्केरा हालेर फर्कनैलाग्दा एउटा काउन्टरको जुँगामुठेले भीडबाट अलि परतिर तानेर कानमा फुस्फुसायो– “तपाइँलाई अपठेरै परेजस्तो छ, प्रति टिकटको २० हजार बेहोर्ने हो भने खोजखाज गरेर मिलाइदिउँला, हुन्छ ?” उसको दिमागमा झड्का हान्यो– घर जान चारजनाको हवाइभाडा ८० हजार ? अझै प्लेनबाट ओर्लेर साढे दुई घण्टाको गाडीयात्रा त बाँकी छ... । उसको मुखबाट अनयासै फुस्स निस्कियो– “यति महँगो ?” जुँगामुठेले तुरुन्तै जवाफ दियो– “ए... सस्तोमा त नाइट बसमै गए भइहाल्यो नि !” ठिकै भनिस् जुँगे ! जसरी पनि दशैँ मान्न घर त जानु नै छ... ।
“टिकट सकिएको भए ती बाहिरका केटाहरू कहाँबाट टिकट दिन भनेर यात्रुलाई तानिरहेका छन् त प्रभु ?” प्रभु मात्रै भनेन, उसले हात पनि जोड्यो । जुँगे एकपटक जोडले हाँस्यो र उसले भन्यो– “त्यो त उनीहरूलाई नै सोध्नुस् बा...!” आजित भएर लखरठ्याक काउन्टरबाट बाहिर निस्कियो र खुइय गर्दै पेटीमा टुसुक्क बस्यो । छेउमा टिकट दलाल अघिकै ठिटाहरू यात्रुसँग बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । सरकार र व्यवसायीसँग संझौता गरेर हालै कायम गरिएको एक हजार दरको भाडामा उनीहरू पाँच हजारसम्म मागिरहेका छन् । उनीहरूले मागे जति पैसा दिन तयार हुने यात्रुलाई टिकट दिन सटरपटर गरिरहेकै छन् । यो देखेसुनेर लखतरान पर्दै डेरा पुगेको लखरठ्याकले यसपालिको दशैँ कतै नगई राजधानीको डेरामै मनाउने घोषणा गर्यो ।
नभन्दै खसी किन्न नसकेपछि फूलपातीको दिन लखरठ्याक लखरलखर गर्दै पुग्यो तरकारी बजार । पूरै तरकारी बजार घुम्यो र सस्तो मूल्यको तरकारी खोज्यो । सबभन्दा सस्तो भनेको ९० रु. किलोको भ्यान्टा र ८५ रु. किलोको मुला २÷२ किलो अनि सय रु. किलोको १ किलो लौका जोख्यो । मूल्य ति¥यो अनि हेण्डलमा दुईतिरै झुण्ड्याएर खटारा बाइक स्ट्राट ग¥यो । खसी किन्न गएको लखरठ्याक घर आइपुगेको सङ्केत पाएर छोराछोरी र माउ पनि बाहिर निस्किए । “हैन, खै त खसी ?” माउको प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै बाउले तीनवटा पोका थमाउँदै भन्यो– “लौ, यसपालिको दशैँखसी यही हो । अब काटकुट पार, मुलाको सुरुवा बनाऊ, लौकामा झोल हाल र भ्यान्टा भुट ! ३÷४ छाक पुगिहाल्छ । बस् ! यस्तै दशैँ मनाउन त हामीले लोकतन्त्र ल्याएका हौँ ।” आमा र छोराछोरी घरी लखरठ्याकको अनुहार घरी लौका, मुला र भ्यान्टाको थैलो हेरेका हेर्यै हुँदा भए... !